Ndange Intombazana nguKaty Perry - Izinto Zobugcisa
Ndange Intombazana nguKaty Perry
Kule ngoma uPerry udibanisa iinzwane zakhe kulwandle lokulinga xa encamisa intombazana emva kobusuku beklabhu (iziselo ziyabandakanyeka). Uyavuma ukuba uyayithanda, kodwa ayisiyonto inentsingiselo, kwaye ngaphandle koko, unesoka - yenye nje iklabhu yasebusuku yobudenge. I-Californian itsale ukugxekwa kwezinye iindawo ekujolise kuzo kubaphulaphuli abancinci ngengoma malunga nolingo lwesini.
Kwakungowokuqala ongatshatanga kaPerry, kodwa kwafuneka aqinisekise ukuba inkampani yakhe yokurekhoda iyayikhulula, njengoko babengayifuni kwi-albhamu ekuqaleni. U-Perry ucacisile ngo-2010, 'ndandichulumancile ukuyikhupha loo nto kuba yayiyingoma emnandi enokuthi ibe sisidenge kwaye ithethe okuthile emntwini. Yayingumbandela ophambili owawusencamini yolwimi lomntu wonke ngalo mzuzu, ke wawunjengomfanekiso nje wezinto ezazisenzeka ngo-2008. '
Le yayingengoma yokuqala apho uPerry wayebhekise khona kwimicimbi yokuzibandakanya kwezesondo kumagama akhe. Kukhululo lwangaphambili lomculi-umbhali-wengoma waseLos Angeles 'u-Ur Ke Gay' ukhupha inkwenkwe eyindoda engenamdla kuye:
Udinga i-SPF-45 ukuze uhlale uphila
I-Ur ke isitabane kwaye awuthandi amakhwenkwe
Into enomdla kukuba, i-albhamu yokuqala kaPerry, eyakhutshwa ngo-2001 phantsi kwegama likaKaty Hudson, yayiyicwecwe lomculo lamaKristu elalikhutshwe yileyibhile yamaKristu. Bobabini abazali bakhe ngabefundisi kwaye wakhula emamela umculo wegospile- umculo wasekhaya wawuvaliwe ekhaya. Abanye abahlomli bavakalise ukumangaliswa yile meko yokujika kumculi ongumculi-umbhali wengoma abe yintombazana yeqela elisela kakhulu elicula ngobufanasini. Ezinye iicawa zazingonwabanga.
Ukongeza kuKaty Perry, uGqirha Luke ('Emva kwala Amehlo eHazel,' 'okoko uhambileyo,' 'intombi'), uMax Martin (' Yhu ... Ndiyenzile kwakhona , '' Usana olunye ixesha, '' Ndiyifuna ngaleyo ndlela ') kunye noCathy Dennis (' Awunakukhupha entlokweni yam , '' Ityhefu , '' Malunga Nawe Ngoku ') baneekhredithi zokubhalwa kwengoma kule ngoma. UGqirha uLuka naye uvelise ingoma.
NgoLwesine nge-26 kaJuni ka-2008, iBillboard yabhengeza ukuba le ngoma ibisemthethweni yaba liwaka le-1 le-US elinye lamaxesha e-Rock, eyaqala ngo-1955 xa 'iDwala elijikeleze iwotshi' nguBill Haley kunye neeComets zafika kwi # 1 kwinto emva koko wabiza itshathi yaBathengisi abaPhambili.
UPerry wasayinwa kwiCapitol Records, ekwalikhaya likaColdplay, owayeneyokuqala # 1 nge ' Phila ubomi . ' Eli yayilixesha lokuqala iCapitol inezinto ezimbini ezilandelelanayo # 1 ukusukela ngo-1976 xa 'Iingoma zothando ezingavakaliyo' zilandela 'iBoogie Fever' kwindawo ephezulu.
Kudliwanondlebe kunye IVentura County Star , UPerry ubanga le ngoma imalunga nokuhlola kunye nokudibana kwamabhinqa. Uthe, 'Kukho ubuhle bomlingo obabanjwa ngabasetyhini ngokuqinisekileyo obunokubulala zonke iintlobo zamadoda. Ukuba uAngelina Jolie, uNatalie Portman okanye uGisele Bündchen bangangena egumbini, wonke umntu wayeza kubukela. '
Le ngoma yabelana ngegama ngengoma kaJill Sobule eyabetha ngo-1995. U-Perry uxelele iindaba ze-MTV: 'Ukuba ingoma yam iqondisa ukugcwala kuJill, iyamangalisa. Ufanelekile. '
Le yayiyiyokuqala # 1 yombhali wengoma uCathy Dennis. Ngo-1991 wayerekhode ezintathu eziphezulu zaseMelika ezibandakanya 'ukundichukumisa (bonke ubusuku obude)', eyafikelela kwi # 2. UDennis waphinda wabhala ezinye izinto ezi-10 eziphezulu, ezona zaziphumelele ngaphambili ' Awunakukhupha entlokweni yam , 'efike kwi # 7.
NgoJulayi 2008 le yaba yingoma yokuqala ukusukela ngeGnarls Barkley ' Uyaphambana Ukuvela ngaxeshanye kwi-Mainstream Top 40, kwiRhythmic, kwaBadala abaPhezulu abangama-40 nakwezinye iitshathi ezizezinye.
UPerry weza nengoma yale ngoma unyaka nonyaka onesiqingatha ngaphambi kokuba ayirekhode. Yagqitywa ingade igqitywe kwiseshoni noGqirha uLuka apho wagqiba kwelokuba ayigqibe.
Perry uxelele i Umculo woMbonisi qho ngenyanga ukuba le ngoma imalunga nomnqweno wokunxila, hayi njengoko abanye beyicacisile, umnxeba wokutshintsha imeko yesondo. Ucacisile: Ndiyathetha ngendlela amantombazana achukumiseka ngayo kwaye enobuhlobo. Ingakumbi xa sikhula. Sibambene ngezandla, silala ngokulala, senza umdaniso wokudanisa ngokudanisa kwiipijama zethu, sipeyinta iinzipho zethu kwaye siqhelise ukwanga ezingalweni zethu - okanye mhlawumbi siqhelana ukuqabulana. Yayingeyonto besiyenza ngenxa yomnye umntu kuba sisoyika amakhwenkwe. Ndiyazi ukuba bendisoyika amakhwenkwe! Ukuncamisa kwam okokuqala bekukho nenkwenkwe, kwaye waphantse wandiginya ndiphila. Ndiyathanda ukuba ndaye ndamanga loo ntombazana endiyithandayo. Ngendikulungele ngakumbi ukuthandana kwam, ndiyacinga.
Oku kwafaka iBillboard Hot 100 iiveki ezisixhenxe zilandelelana, zilinganisa irekhodi lengoma ekhutshwe kwiiCapitol Records kwixesha ledwala- iBeatles '' Ndifuna Ukubamba Isandla Sakho (ekwiCapitol) walawula iiveki ezisixhenxe ngo-1964.
Le yayiyeyona ibaleke ixesha elide # 1 ngumculi obhinqileyo oqala ukubetha ukusukela oko uCiara's 'Goodies' wanyusa i-Hot 100 kwiiveki ezisixhenxe ngoSeptemba-Okthobha 2004.
UKinga Burza, owayekhokele ividiyo yengoma, uxelele i-MTV News ukuba inyuselo ibibekwe kwigumbi lehotele kodwa ngenxa yenkxalabo kuhlahlo-lwabiwo mali kunye nexesha elinzima kwindawo leyo itshintshiwe. Endaweni yokuba yafotwa kwinqaba yee-1970 kwiiHollywood Hills ezihlala zisetyenziswa njengendawo 'yeefosos kunye neefilimu ezoyikisayo.'
UBurza ucacisile kudliwanondlebe olufanayo ukuba kutheni kunokuba athathe indlela eyiyo kwiingoma zomculo, usebenzise le vidiyo ukubonisa uthando lukaPerry. Uthe: 'Ndifuna nje ukuba uKaty enze, ngelixa ndirhangqwe yimithwalo yamantombazana athandana kakhulu. Ewe, bendingafuni ukuwafaka kakhulu, njengoko ividiyo ibimalunga noKaty, kwaye kum, ibininzi malunga nokugxininisa kunye nokucebisa ngobume bomzimba obukrelekrele kunye nee-silhouettes. Kwakungekho [malunga nokuba] ngokucacileyo okanye ukungathandeki. Iingoma zengoma zanele. Asifuni ulutsha lwabasetyhini kwihlabathi liphela ukuba batshintshane kuba bajonge kuKaty Perry! '
Isoka likaKaty Perry ngelo xesha, indoda ephambili yeGym Class Heroes uTravie McCoy, uxelele iMTV News malunga nexesha lokuqala ukuva le ngoma. Ukhumbule: 'Xa wayerekhoda irekhodi lakhe wayendithumelela iingoma, kwaye xa sisenza irekhodi lethu ndandimthumelela iingoma. Ke undithumelele idemo ethi 'Ndamanga Intombazana,' kwaye besikhenketho, kwaye bendiyidlala ngexesha lotshintsho, ndibukele nje abantwana besabela. Uye waphuma waya komnye wemiboniso yethu, kwaye ingoma yaphuma yaphuma, ngathi, 'Wenza ntoni ngoku?' kwaye ndimse ecaleni kweqonga ukuze abukele isihlwele sisabela. Kwaye ngoku, ulungile. '
Oku kuphumelele imbasa yeNgoma ePhambili yePop kwiiMbasa zoKhetho zaBantu ezingama-35, ebibanjwe nge-7 kaJanuwari ka-2009. Kwiintsuku ezimbalwa kamva iphumelele imbasa yeVirgin Media Music yeTest Track.
U-Perry utyhilelwe Q Matshi 2009 ukuba iingoma zimalunga nentombazana yokwenene. Ucacisile: 'Ingoma iphefumlelwe ngobuhlobo endandinabo nentombazana xa ndandineminyaka eyi-15, kodwa andizange ndimphuze. Ndandinomdla kuye. Wayenolusu olucekeceke kakuhle, imilebe yakhe igqibelele- kwaye ndisathetha naye, kodwa andikaze ndimxelele ukuba le ngoma imalunga naye.
I-Kesha eyaziwayo ngaphambili ibonakala kwividiyo yomculo yengoma. Imvumi ye 'TiK ToK' icacisile ukuba Singama-Pop Slags: 'Ngokwenene sasingabahlobo ngaphambi kokuba aphumelele. Sasisazi nje ukuba singaphandle kwaye sasisebenza nabanye abantu abafanayo eLos Angeles. '
Kwividiyo: Ikati kaKaty, uKitty Purry.
Uxelele uPerry Ibhilibhodi ukuba le ngoma iphantse ayayenza kwi-albhamu. Uye wathi, 'Kwakukho inkxalabo ephezulu, kodwa ndabavumela ukuba bahlale nengoma kwaye beze ngeenxa zonke. Bayithanda kakhulu, yaba (ligosa lokuqala) elingatshatanga. '
Ukucinga ngale ngoma ngo-2013, uPerry uxelele Ukuzonwabisa ngeveki Ndicinga ukuba iyasebenza kuba yayingumbono we-zeitgeist. Wonke umntu wayethetha ngobungqingili kunye nokuzama. Kunokuba ngesiquphe ube nengoma. '
U-Perry wenza le ngoma kunye no-Lenny Kravitz ngexesha lekhefu le-Super Bowl ka-2015 (apho amaPatriot abetha ama-Seahawks ngokukhawuleza). Emva kokuba uPerry wazise uKravitz, waqala ukucula ingoma, ethatha intsingiselo eyahlukileyo xa uculwa kwimbono yendoda. UPerry wajoyina, uKravitz wadlala ikatala yedwa (nangona isixhobo sakhe sasingakhange sikhutshwe), emva koko uKaty wadlulela kwicandelo elilandelayo lokusebenza kwakhe.
Nabani na onamathela malunga nesiqingatha sexesha ukuze abone uKravitz edanile xa embona ethotyelwa kwindima, ngaphandle kokudlala enye yeengoma zakhe ('undwendwe olothusayo' uMissy Elliott wadlala iingoma zakhe ezintathu). Ukumenza ukuba acule 'Ndamanga Intombazana' kubonakala ngathi yindlela yokufihla eyona ntsingiselo yengoma kubo nabaphi na ababukeli abanokuthi bakhubekiswe.
Ingoma yaphefumlelwa nguScarlett Johansson. Xa umdlali weqonga waxelelwa ngale nto ngexesha lodliwanondlebe kunye Ukutsala , Uphendule wathi: 'Kuyacenga, kodwa imilebe yam ithathiwe.' (UJohansson wayesanda kutshata nomlingisi uRyan Reynolds ngelo xesha).
Wongeze wathi, 'Bendingazi. Ndifanele ndisikwe! '
Ngo-2017, uPerry waye iwongwe liPhulo lamaLungelo oLuntu ngeMbasa yeSizwe yokuLingana yokuxhasa uluntu lwe-LGBTQ. Kwintetho yakhe yokwamkela, uthe, 'Ndingumculi-umbhali wengoma, ngokunyanisekileyo. Ndithetha iinyani zam kwaye ndiyipeyinta into endiyicingayo kwezi ngoma zincinci zilumkileyo. Umzekelo, 'ndamanga intombi kwaye ndayithanda.' Inyaniso mayixelwe, ndenze ngaphezulu koko. Ndiza kuyidibanisa njani loo nto kunye nentombazana eculayo yevangeli ekhuliswe kumaqela olutsha eyayiyinkampu yenguqu? Into endiyaziyo bendinomdla wokwazi, kwaye nalapho ndandisazi ukuba isini sasingemnyama namhlophe njengale lokhwe. Ngokunyanisekileyo, andisoloko ndiyifumene, kodwa ngo-2008 xa loo ngoma yaphuma ndazi ukuba ndiqalise incoko kwaye ihlabathi elininzi libonakala linomdla ngokwaneleyo ukucula kunye.
Ukuthetha nge-103.5 KTU's Cubby kunye neCarolina kusasa kudliwanondlebe luka-2017, u-Miley Cyrus wabanga ukuba wayeyintloko yengoma.
'U-Katy Perry, ebengumhlobo wam ixesha elide. Ngokwenyani besibona nje ngolunye usuku kunyaka olandelayo, siza kuba ngabahlobo kangangeminyaka eli-10. Ndicinga ukuba ngumhlobo wam endimaziyo omde, oyinyani, onqabileyo, utshilo uKoreshi. 'Ukuphuma kwakhe' Ndamanga Intombazana, 'bendisenza imovie yaseHannah Montana, kwaye ndimvile kunomathotholo, bathi,' Ubhale ngabani ngaloo nto? ' Kwaye uthe kum.
I-aerosmith andifuni kuphoswa yinto yokutyumba
Yeyiphi imoto ekhankanywe ngamagama kwingoma yomxholo weTV "bonke kusapho"?
andinakufumana ngokwaneleyo imowudi yedepeche
nokuba uyintoni ndizohlala ndinawe
chris de burgh inenekazi elibomvu
ngubani 4 eyez yakho kuphela malunga